Hery - Tsiky dia ampy | Politika | 6
Tany Dago aho, milamina any :-)
2011-01-25 @ 08:07 in Izaho sy ny ahy, Politika
Sao mbola nisy tsy nahalala :-) Izany tokoa mantsy no fanao, rehefa ho any Dago dia tsy miteniteny fa rehefa avy any dia atao fantatry ny rehetra any amin'ny fb sy bf (vakio hoe béfé) rehetra any. Sary etsy sy eroa, ary matetika atao karazan-toerana maro mba hitenenana hoe voatetiko i Madagasikara (yes, ho avy tokoa ny sary lol). Etsy Ampefy no maka sary, atao angles maromaro dia toa ny hoe tany Nosy Be sy Sainte Marie... (azo atao tsara) (tohiny)
Betsaka tokoa ny resaka momba ny fitsapan-kevi-bahoaka ho avy ity ka mba arosoko ihany koa ny ahy. Mizara efatra izao mantsy ny firehana. Ireo mampanao Eny, ireo mampanao Tsia, ireo mamporisika tsy hifidy ary ireo izay tsy mahalala n'inona n'inona ka mifidifidy na tsy mifidifidy (firehana koa ireo). Hoy i Simp tatsy ambadika hoe "Ny ankamaroan'ny olona moa dia hoe tsy misy dikany ilay fifidianana satria na eny na tsia no lany dia tsy mampiova inona izany"... dia izay no manentana ny olona tsy hifidy. Raha ny fahalalako azy anefa, ny manentana ny olona tsy hifidy dia ilay fiarovana ny safidiny. Eritrereto tokoa moa fa raha TSIA no alatsakao kanefa miova ho ENY tampoka rehefa avy eo... dia aleo tokoa tsy mifidy. Amin'iny mantsy ny safidinao mba tsy azo angalarina. (tohiny)
Manaova fety sambatra
2010-06-26 @ 06:24 in Politika
Dia miarahaba ny Malagasy nahatratra izao faha 50 taonan'ny nanomezana an-taratasy ny fahaleovan-tena izao.
Azo atao tsara ny manao fety na dia tsy hiaraka sy tsy hanatrika ny fetin'ny HAT aza. Ahoana tokoa moa no hiaraka hanao fety raha tsy olona efa mihavana sy mifankatia? Hanao fety ianao kanefa gadrainy ny havanao, hidiny ny radio fihainonao, samboriny ny namanao... ianao anefa antsoiny hanao fety miaraka aminy.
Miantsoantso fihavanana izy kanefa izy aza tsy manao dingana iray amin'izany akory.
Mety mahavita fety goavana sy makotroka izy. Tsy mampaninona izany satria azy ny vola sy ny bois de roses. Fa ianao kosa raha tsy mankasitraka izay ataony dia aza manaiky ny mena miraviravy. Robarobain'ny mpanana. Aleo ravim-bomanga tsy arahin-dromoromo toa izay sakafo be arahin-datsa.
Tandremo sao ataony fitaovana ianao. Notambatambazany an'izao rehetra izao hanatrika ny fety karakarainy, dia avy eo lazainy eran-tany fa nanaiky sy nakatò azy. Faly ery izy hampiseho sary hoe an'aliny no nanatrika izany... ary anisany ianao.
Koa manaova fety sambatra ary, mba ho tena sambatra tokoa anefa fa tsy arahin'ny feon'ny fieritreretana.